Fanavaozana ny rafi-panjakana : Nankatoavin’ny Vondrona Afrikanina -
AccueilSongandinaFanavaozana ny rafi-panjakana : Nankatoavin’ny Vondrona Afrikanina
Fanavaozana ny rafi-panjakana : Nankatoavin’ny Vondrona Afrikanina
20/11/2018 admintriatra Songandina 0
Nikatona ny 18 novambra teo ny fivoriambe tsy ara-potoan’ny Vondrona Afrikanina. Fihaonana sady fivorian’ny Filoham-panjakana sy governemanta notanterahina tany Addis-Abeba, Ethiopie, nandritra ny roa andro.
Araka izany, nankatoavin’ny fivoriambe sy ny Vondrona Afrikanina avy hatrany ny lohahevitra tamin’izany, dia ny fanavaozana ny rafi-panjakana. Rafitra izay mitondra mnkany amin’ny fanatsarana ny hetsika amin’ny fikarakarana. Anisan’ny nankatoavina ny tolo-kevitra avy amin’ireo kaomisiona, indrindra ny mahakasika ny firafitry ny kitapom-bolan’ny mpiasam-panjakana ambony sy ny dingana amin’ny fandraisana mpiasa sy ny fahataperan’ny iraka ataony amin’ny firenena. Eo ihany koa ny fanavaozana hoentina amin’ny fitantanana ara-panjakana…
Manaraka izany, nandritra ny fivoriambe ihany koa no nisian’ny tsangan-kevitra amin’ny famadihana ny fiaraha-miasa vaovao ho an’ny fampandrosoana an’i Afrika (NEPAD), ho masoivohon’ny fampandrosoana sy ny fidiran’ny rafitra afrikanina ho an’ny tombana (MAEP) eo anivon’ny rafitry ny kaomisiona.
Raha ny vaovao, noho ny fahatsapana ny amin’ny fisian’ny lesoka sy tsy fahatomombanana eo amin’ny fitantanana ny raharaham-panjakana no nanatanterahana ny fankatoavana ny fanavaozana ny rafi-panjakana aty Afrika. Eo ihany koa ny fampiroboroboana ny lafin’ny toekarena manga, ny fahaleovantena ara-bolan’ny Vondrona Afrikanina.
Ny filohan’i Rwanda sady filohan’ny Vondrona Afrikanina am-perin’asa, Paul Kagamé, kosa indray no nanokatra sy nitarika ny asan’ny kaomisiona tamin’izany. Teo ihany koa ny fanatrehan’ireo Filoham-panjakana sy governemanta avy amin’ireo firenena mpikambana eo anivon’ny Vondrona Afrikanina. Anisan’ireo firenena nandray anjara tamin’izany i Madagasikara.
Ambilobe, Ambilobe Sirama, Ampanefena, Anivorano, Antsirabe Nord, Antsiranana, Daraina, Mananara Avaratra, Maroantsetra. Ireo no faritra notsidihan’ny kandidà laharana faha- 25 ,Marc Ravalomanana ny zoma sy sabotsy lasa teo. Ny famelabelarana ny MAP2, izay paikady entina ...Tohiny
HCC : Difotry ny kolikoly